Fitaovana UI UI 10 tsara alaina maimaim-poana | Famoronana an-tserasera
Tian'ny mpamorona Fitaovana UIfa fantatrao ve ny anton'izany? Ny anton'izany dia satria aingam-panahy izy ireo ary dia fanampiana lehibe ho an'ny hevitra vaovao, ankoatry ny zava-misy fa izy ireo koa dia fanondroana tsara momba inona ireo loko misy loko, endrika, fandaminana ireo singa ary zavatra maro hafa.
Rehefa mila mpamorona mamorona lamina finday na koa ny birao, ny lafiny izay ampahany amin'ilay tetikasa dia samy hafa be: Famolavolana UI sy UX. Androany, ireo no singa fototra hahombiazan'izay atao hoe fangatahana ary izany dia ny hanana fotoana mety afaka mianatra UI sy Ux fomba fanao tsara indrindra maneho zavatra tena ilaina ho an'ireo olona te-hampivelatra ny interface ary afaka manana fifandraisana tsara indrindra eo amin'ny inona ilay rindranasa sy ny mpampiasa.
Ary noho io antony io no nosafidianay Fitaovana UI 10 maimaim-poana izany dia afaka manampy be dia be amin'ny hevitrao sy ny andinin-tsoratra ho an'ny tetik'asa manaraka.
Lisitra miaraka amina Kits UI 10 Maimaimpoana
2 Kit Kit: Basiliq
5 Kit UI: Ecommerce
6 Kit UI: Dashboard manokana
7 Kit UI: Components IOS
8 Fitaovana UI: Jam Retro
9 Kit UI: mpiorina UI
9.1 Kit UI: Tiles miloko
Kit Kit: EventPro
Kit UI io manana singa kanto sasany ary avy eo madio, izay misy ifandraisany amin'ny inona ny hetsika sy ny fandaminana.
Kit Kit: Basiliq
Etsy ankilany manana an'io isika Kit UI feno be izany dia noforonina tamin'ny alàlan'ny firesahana azy amin'ny lafiny iray amin'ny tanana, izay azo lazaina fa nisy singa 300 mahery.
Nerdial App UI dia fampiharana namboarina tanteraka miaraka amin'ny fironana ankehitriny, ohatra, azontsika atao ny manonona inona ireo tsipika tsara ary ireo sary lehibe, loko fisaka, endrika mangarahara, sary masina voatanisa. Ankoatr'izay dia misy dikanteny ho an'ny fitaovana famolavolana toa ny Photoshop ary Sketch.
Kit Kit: Gumballz
Miaraka amin'ny fomba nesorina indrindra, Gumballz Web UI Kit manana singa UI mihoatra ny 70 amin'ny PSD, izay namboarina tamin'ny endriny vector sy zavatra Smart ihany.
Kit Kit: Ecommerce
Ity dia fampiharana izay ampiasaina amin'ny fampiasana manokana, fikambanana ara-barotra ary tsy ara-barotra, afaka mivarotra sy / na afaka mizara inona ny kabine sy kojakoja. Fomba tsotra sy minimalist ho an'ny mpampiasa farany.
Kit Kit: Dashboard manokana
Ity kit ity dia samihafa, izay ahitantsika singa toy ny: ny mpilalao horonan-tsary, bokotra, sary ary statistika, singa sosialy sy lahatsoratra.
Kit Kit: IOS Components
Ireo singa ampifandraisan'ny mpampiasa, izay misy ny apps konsep dia nifototra tamin'ny famolavolana iOS. Ny singa rehetra dia endrika vector azo ovaina tanteraka, tafiditra ao anaty fisie PSD iray voalamina tsara.
Fitaovana UI: Famerenana indray
Ireo singa ireo Nahazo aingam-panahy avy amin'ny fomba Retro izy ireo. Izy io dia manana ny kinova kely kokoa maimaim-poana ary ny kinova aloa ihany koa.
Kit Kit: UI Components
Amin'ny ankapobeny dia miovaova be amin'ny tabilao, aiza ny singa rehetra dia vector ary azo ovaina tanteraka.
Kit UI: Tiles miloko
Manana a fomba maoderina, izay ny tena ifantohana dia ny loko sy ny fivelomana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Fitaovana UI UI 10 tsara halefa maimaim-poana